Expert Semalt: Olee otú iji mee ihe nke B2B Email Marketing
Karịa pasent iri asaa nke ndị ahịa na ndị ahịa na-eji akwụkwọ akụkọ ozi mgbasa ozi dịka akụkụ nke atụmatụ ahia ha , na-abata n'azụ nanị posts blog na mgbasa ozi mgbasaozi maka iji ha eme ihe. Ka ọ dị ugbu a, ahịa email bụ nhọrọ kachasị mma ma bụrụ onye a na-ewere dịka ọfụma kasị nwee ntụkwasị obi mgbe ọ na-abịa ikesa ọdịnaya n'etiti ndị ahịa B2B.
Atụmatụ na-egosi na ihe karịrị pasent 90 nke ndị ahịa B2B na-enye mmasị na atụmatụ ahịa a na pasent iri isii na ise n'ime ha na-eji usoro ntanetị raara onwe ha nye aha iji mee ka ọrụ ha rụọ. Ọ dị mma ịsị na ahịa ahịa B2B enweela ọmarịcha ewu ewu n'ihi na ọ na-achọpụta na ọ ga-alaghachi na nkwụnye ego. Ihe karịrị pasent iri asatọ nke ndị America na ndị Europe na-eji ozi ịntanetị kwa ụbọchị. Nke ka mkpa bụ na e kpughewo na ozi ịntanetị nwere ike ịzụta ịzụta na okpukpu abụọ nke ọnụahịa netwọk mmekọrịta, na pasent 70 nke dị elu.
Oliver King, Onye Ọrụ Gbasara Aka nke Ahịa Semalt , na-akọwa ebe a nduzi iji nweta uru site na ịzụ ahịa email.
Mgbe a bịara n'ịkwurịta ndị ahịa, ihe mbụ na-emetụta uche anyị bụ ndị na-ere ahịa site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ. Ha na-enwe obi ụtọ n'ihi na ha nwere ọtụtụ ohere ịnweta ndụ, ebe ahịa email ahụ na-agụnye ịnye ọtụtụ ozi ịntanetị na enweghị nkwa nke ị nweta ụba. A na-ewere ahịa ịbanye ahịa dịka ụzọ nke ịmepụta storefronts na cyberspace. Ihe dị na saịtị gị ga-ekpebi ole ndị ahịa ga-adọrọ mmasị na ya.
Ọ bụ eziokwu na ozi ịntanetị na-ahụ ọdịiche ahụ. Ndị na-adabere n'ahịa ahịa kwesịrị icheta na ha agaghị enweta ihe ndị a chọrọ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ndị ahịa gị ga-achọta okwu ndị ị kachasị, ha ga-abanye na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ntanetị mgbasaozi mmekọrịta, ị na-eme nnukwu ndudue..N'ụzọ dị iche, ozi ịntanetị nwere ike ị nweta ọtụtụ ndị ahịa, hụ na a na-anụ olu gị mgbe niile na ịntanetị. Site n'inwe ahia email, ị nwere ike ịnye onwe gị n'ihu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa ma nwee ike izipu ozi gị ziri ezi na igbe mbata ha. Otú ha si emeghachi omume na ozi ndị ahụ dabere n'otú i si gosipụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị n'aka ha. Ka m kwuo ebe a na ọ bụghị ahịa azụpụta.
Olileanya nwere ike ileghara gị anya jide n'aka na email gị dị iche na ozi ndị ọzọ yiri ya ma gbalịa itinye ndị ahịa. Nke a bụ naanị ụzọ ha ga-esi ehichapụ ya n'enweghị nyochaa nkọwa ngwaahịa ahụ.
Na nkenke, ahịa B2B na-enye gị ohere ịbịakwute ọtụtụ ndị mmadụ ozugbo ma belata nrụgide gị n'ọtụtụ. Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ndị mmadụ nwere ike ịchọta ozi ịntanetị gị na-ewe iwe ma na-ewe iwe ma nwee ike ịhọrọ iji gbochie gị ID ma mee ka ha mee mkpebi ha.
omume B2B kasị mma
Ozi B2B bara uru na-esote otu ụzọ dịka ndị ozo azụmahịa na-azụ ahịa:
1. Ihe ndị na-akpali akpali maka ịmepụta ọdịdị nke ịmara na ngwa ngwa ịzụlite echiche nke ịdị ngwa.
2. Ezigbo ederede nke na-anaghị emebi ma ọ bụ meander oge nke ndị nnata.
3. Ihe ngosi vidiyo na omenala maka ịmepụta ozi ndị a na-adọrọ mmasị ma na-atụ egwu.
4. Ọdịnaya nke na-eme ka ozi ịntanetị gị dị mfe iji gụọ ma gosipụta isi ihe dị mkpa.
Na nkenke, azụmahịa ga-ewulite ntụkwasị obi iji dọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ, hụ na ndị ahịa gị nwere obi ụtọ na afọ ojuju na ngwaahịa na ọrụ gị. I kwesiri ijide n'aka na usoro ahia ahia achikota ozi na ozi gi B2B Source .